नेप्से परिसूचक १७ अंकले घट्यो, होटल र फाइनान्स बाहेक सबै — Imandarmedia.com
नेप्से परिसूचक १७ अंकले घट्यो, होटल र फाइनान्स बाहेक सबै
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर बजार १७ अंकले ओरालो लागेको छ । १७.७९ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २ हजार ४ सय २३ दशमलव ०९ अंकमा झरेको छ । नेप्से परिसूचकमात्रै होइन ‘क’ वर्गका कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४.५८ अंकले ओरालो लागेको छ ।
होटल र फाइनान्सले कमाए, कुनले गुमाए ? नेप्सेमा कारोबार हुने होटल र फाइनान्स समूहका लगानीकर्ताहरुले भने बुधबार कमाएका छन् । होटल समूहको परिसूचक ५४ दशमलव ०५ अंकले बढेर २ हजार ७२ दशमलव ८८ अंकमा पुगेको छ । उता फाइनान्स कम्पनीको १३ दशमलव ०७ अंकले उकालो लागेर १ हजार १ सय ७७.०१ अंकमा पुगेको छ ।
बाँकी सबै सबइनडेक्सहरु भनेर घटेर राताम्मे देखिएका छन् । बैंकिङ इन्डेक्स ६.८१ अंकले ओरालो लागेको छ भने व्यापार ९२ दशमलव ४२ अंकले घटेको छ । विकास बैंक २९ दशमलव ४८ अंकले ओरालो लागेको छ भने हाइड्रोपावर २७.५ अंकले ओरालो लागेको छ ।
यसैगरी निर्जिवन बिमा ९८.५७, उत्पादन मूलक ४१.८७, लघुवित्त ५९.७२, जीबन बिमा ४१.०९ र म्युचुअल फण्ड ०.०३ अंकले ओरालो लागेका छन् ।
बजार घट्दा पनि धेरै कमाउने १० कम्पनी ? नेप्से परिसूचक घटे पनि केहि कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले भने राम्रै कमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै कमाउने गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरु देखिएका छन् । यस संस्थाको ९.९७ प्रतिशतले सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ ।
दोस्रोमा प्रभु लाइफ इन्स्यारेन्स देखिएको छ भने तेस्रोमा युनाइटेड फाइनान्सका लगानीकर्ताहरुले धेरै कमाएका छन् । प्रभु लाइफको ९(९४ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढ्दा युनाइटेडको ९.८८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी पोखरा फाइनान्सको ८.३६ प्रतिशत र ओरियण्टल होटलको ७.०३, बाटलर्स नेपालको ६.६५, नेपाल बैंकको ६.५३, श्रीइन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ६.२५ र हिमालयन पावर पार्टनरको ६.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आज नेपाली बजारमा घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
साताको तेस्रो दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से तीव्र उचारचढाव पछि २१ अंकले घट्यो
फेरी बढ्यो सुनको मुल्य,कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
नेप्से ३.६६अंकले बढ्यो, निफ्राका लगानीकर्तालाई मालामाल